Food, Drink & Recipes » မျှစ်စို့ပေါက်အလား ဖွံ့ထွားထွားး – KZ’s ထမင်းဆိုင်	49
အောင် မိုးသူ says: မျှစ်တော့ကြိုက်တယ်။ မျှစ်ကို အမျှင်တွေထက် အဝိုင်းလေးတွေလှီးပြီး ချက်ပြုတ်စားတာ ပိုကြိုက်တယ်။
ခင်ဇော် says: မျှစ်ကို ပြုတ်ပြီး ငါးပိထောင်း နဲ့ တို့စားလို့လည်းကောင်းတယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: မျှစ်ဆိုလို့… သတိရသွားတာက…
သူ့သခင်ကြီး ဟိုက်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့ပုံ… ဦးဇာဂနာ (ဦးမောင်သူရ) ကြီး ခုတလော ငြိမ်နေတာတော့ ဟုတ်တယ်..
စကားသွားပြောရင်တော့ ပြန်ပြောသားပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
kai says: ယူအက်စ် အာရှသားတွေဆိုင်တွေမှာ.. ဗူးသွပ်မျှစ်အရွယ်မျိုးစုံရောင်းပါတယ်…။
ခင်ဇော် says: ယတြာလေ။
Alincho says: စာဖတ်ရတာ ဗိုက်ဆာလိုက်ထာနော်…
Mike says: .မျှစ်ကိုဘယ်လို ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်
Ma Ei says: အလွယ်ဆုံးမျှစ်သုပ်ကတော့ အဲ့မျှစ်ပြူတ်ပီးသား၊ ဇာဂနာခြစ်ပီးသားကို
ငပိထောင်းနဲ့နယ်သံပုရာရည်ထပ်ညှစ် စားလိုက်တာပါပဲ … ပြောရင်းစားချင်…
ခင်ဇော် says: မွအိ နည်း ပါတယ်ကော၊
Ma Ma says: တခါတလေ သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့အခါ မျှစ်ကို ပဲပြုတ်နဲ့ကြော်တာကို ကြိုက်တယ်။
မျှစ်က ဂေါက်သမားတွေနဲ့တော့ မတည့်ဘူးတယ် ထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ဂေါက် နဲ့ မျှစ် တည့်မတည့် မသိဘူးးတော့..
kai says: ဂေါက်သမားတွေ မျှစ်စားလို့မဖြစ်ဖူးထင်တယ်..
kai says: ကျန်းမာရေးအချက်အလက်… လာစုထားတာ..။
ခင်ဇော် says: ကျေးကျေး တဂျီးးး
အရီး လေး says: မျှစ်​ဆိုရင်​ လာထား ဘယ်​လိုချက်​ချက်
ခင်ဇော် says: ခိခု..
မြစပဲရိုး says: ဒီမှာ တရုတ် ကလာတဲ့ စည်သွပ် မျှစ်ဘူး တွေ ရလို့ တစ်ခါတစ်ခါ စား တယ်။
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်..
အမှန် က ဓာတ်ပုံလေးးတွေ နဲ့ က ပိုမြိုင်မယ် ဟီးးဟီးးး
Mr. MarGa says: ပလိန်းကြော်​တာကလွဲလို့ ကျန်တဲ့နည်း အကုန်​ကြိုက်
ခင်ဇော် says: ပလိန်း ကြော်လည်း ပုဇွန်ခြောက် ထောင်းလေးနဲ့မှ အိုစကေတာ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သြော် မျှစ်ဘ၀ မသက်သာ။
ခင်ဇော် says: မျှစ်မမ မျှစ်လေးတွေကို သနားသွားပြီ၊
Crystalline says: မျစ်​ပြုတ်​နုနု​လေး​တွေကို အကွင်းတုံး… ပုဂျွန်​..ပဲသီး.. ခရမ်းပြုတ်​သီး..အာလူး… စိမ်းစားငါးပိ.. ငြုတ်​သီးစိမ်း​ထောင်း​လေးနဲ့အိုးကပ်​ချက်​စားငြုတ်​သီးစိမ်း​ထောင်း​လေးနဲ့အိုးကပ်​ချက်​စားလည်း​ကောင်းတယ်​… ကြိုက်​​ပေမယ့်​ သိပ်​မစားဖြစ်​တဲ့အစာ​တွေ​ပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ခုထိတော့ စားတိုင်း ဝင်နေ၊ စားလို့ ရနေလို့ စားမိနေတာပဲ၊.
black chaw says: မျှစ်ပြုတ် ကို ငါးပိရည် နဲ့တို့ စားရတာကို
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: တားဂဒေါ့ …
ခင်ဇော် says: ဘာ ပုံပြင်လဲ??
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အဲ့ပုံပြင်က
မမဂျီး တို့ သိလို့ ရဘူးခည .. ဟီးဟီး … Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2389
aye.kk says: မနေ့ကကင်ပွန်းချဉ်နဲ့မျှစ်ကြော်စားတယ်။
ခင်ဇော် says: ကင်ပွန်းချဉ်နဲ့ ကြော်တာ မစားဖူးဘူး တီအေးး
aye.kk says: အရသာဆင်တူတယ်။
အောင် မိုးသူ says: လောလောဆယ်တော့ မျှစ်အတုံးလေးတွေကို ရခိုင်ချက် စပ်စပ်လေးစားချင်မိနေတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: မျှစ်ကို ပုဇွန်အသေးလေးတွေနဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းစပ်စပ် ရောကြော်စား လွမ်ဆွာကောင်းအိ..
surmi says: ကြောင်လည်း မြန်တျန့်သားဆိုတော့
ဇာတိကိုဘယ်စွန့်နိုင်ပါ့မလဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12385
ခင်ဇော် says: ဒါပေါ့
weiwei says: မျှစ်ဆိုရင်တော့ အကုန်ကြိုက်တာပဲ … ပြုတ်ပြုတ် ကြော်ကြော် ချက်ချက် လုပ်ချင်သလိုလုပ် အကုန်ကြိုက်တယ် ..
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဝေ့ ဆီမှာ လာလာ ယူ စရာတွေအများကြီးပဲ။
kai says: ဇီဇီရေ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟမ်?
ခီးခီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14443
kai says: တလဟင်းတမယ်မဟုတ်တာမို့.. ကုန်တာမြန်တယ်လေ..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟမ်မငီးးး
ဦးကျောက်ခဲ says: တဂျီးရယ် … ရွာသူရွာသားတွေကို မသနားဘူးလား… တစ်ရွာလုံးကို ဓာတ်ပုံတမုန်းတင်ပြီးနှိပ်စက်တော့မှာဗျ…
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်အတွက် ဒီပို့စ်ကို ပရင့်ထုတ်သွားပါကြောင်း.. :P